SEBAMED – MEDiCARE
Best Sellers on Promotion
Promotions in Store Only
အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာဆေး၀ါးများ
လိင်အင်္ဂါနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါပိုးဆေး၀ါးများ
Other Therapeutic OTC Products
Dermatological & Personal Care
ဆံပင်နှင့် ဦးရေပြားဆိုင်ရာ ကုထုံးများ
မျက်စိကျန်းမာရေး၊ မျက်ကပ်နှင့် မျက်မှန်များ
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဆိုင်ရာ ဆေး၀ါးများ
ပိုးမွှားကိုက်ခြင်းနှင့် တုပ်ခြင်းများအတွက် ကုထုံးများနှင့် ပိုးမွှားသတ်ဆေးများ
တစ်ကိုယ်ရည် သန့်စင်ဆေးရည်နှင့် ရောဂါပိုးမွှား သန့်စင်စေသော ဆပ်ပြာများ
လက်အိတ်နှင့် mask များ
ခန္ဓာကိုယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းများ
အစာခြေစနစ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အကျိုးပြု ပရိုဘိုင်အိုတစ်ဆေးများ
အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုဆေး၀ါးများ
ကျန်းမာရေး ဖြည့်စွက်စာများ (နေ့စဉ်)
ဆီးချို နှင့် ဆိုင်သော ဖြည့်စွက်စာများ
မိခင်နှင့် ကလေးဆိုင်ရာ နှို့မှုန့်များ
ဗီတာမင် နှင့် ဖြည့်စွက်စာများ (လူကြီး)
ဗီတာမင် နှင့် ဖြည့်စွက်စာများ (လူငယ်)
သဘာဝ ဖြည့်စွက်စာ နှင့် လိမ်းဆေးများ
အသားအရေ လှပအောင် ထိန်းသိမ်းသည့်ဆေးဝါးများ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့် ဆေးဝါးများ
ပရုပ်ဆီ နှင့် ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး
နား ၊ နှာခေါင်း ၊ လည်ချောင်းဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများ
ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ကိရိယာများ
Test Strip များ
Derma & Medicated Skincare
တစ်ရှုး နှင့် မျက်နှာသုံး ဂွမ်းများ
ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး သုံးပစ္စည်းများ
မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာများ နှင့် မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာများ
Branded Skincare Regimens
လူကြိုက်များသော Brand များ
Baby Bright & Cathy Doll
SAI Sexy & Intelligent
Exclusives on Promotions
Home / ဆေးဝါးများ / Cosmecuticals / SEBAMED
Prescription ဆေး (1)
ကျန်းမာရေး ဖြည့်စွက်စာများ (48)
ကျန်းမာရေး ဖြည့်စွက်စာများ (225)
ကျန်းမာရေး ဖြည့်စွက်စာများ (317)
ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ကိရိယာများ (87)
သားဆက်ခြား ပစ္စည်းများ (32)
အထွေထွေ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ (277)
Payment Method For Home Delivery :
- Medicare Exclusives
- Trademark Notice
- Terms & Conditions of Use
Total Wellness Lifestyle Beauty Mart CO., LTD.
Room 004, Building (C), Ground Floor, University Avenue Housing, Aye Yeik Thar (2) Street, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Tel: (+95)9797145500
Issued by the DICA.
Get more deals and discounts!
Copyright 2022 © MEDiCARE - Sitemap
329421,329427,329107,329110,328821,328824,328827,328830,328833,328836,328839,328842,328815,328818,328617,328620,328623,328454,328457,328461,328489,328492,328451,328421,328424,328427,328430,328433,328436,328439,328442,328445,328418,328391,328394,328397,328400,328403,328406,328409,328412,328415,328388,328361,328364,328367,328370,328373,328376,328379,328382,328385,328355,328358,328349,328352,329424,3284480 No products were found matching your selection
Your products will be prepared for delivery to your home.
SHOP SELECTED SUCCESSFULLY!
| How would you like to proceed with your order?
Click below HOME DELIVERY
Click below COLLECT AT STORE
BACK TO ABSOLUTELY EVERYTHING @ MEDiCARE